Administer, Author at Simpal Khabar
Apr72018 by AdministerNo Comments
कतारको एउटा यस्तो रहस्य जुन तपाइलाई थाहा छैन (हेर्नुहोस भिडियो )
कतारको एउटा यस्तो रहस्य जुन तपाइलाई थाहा छैन (हेर्नुहोस भिडियो) के तपाईंलाई कतारको बारेमा यी कुराहरू थाहा थियो ? यस्ता छन् बाँकी जानकारीहरु कतार विश्वकै सम्पन्न राष्ट्र मध्यको एक हो । यसले आफ्नो शुभारम्भ देखि अहिले सम्म विकासका पाटोमा धेरै परिवर्तन देखाएर विश्वमा नमुना बन्न सफल भईसकेको छ । दक्षिण पट्टी साउदी अरेबिया संग सिमाना जोडिएको यो देशको अरु छिमेकी बहराइन र युएई हो । बाँकी जानकारीहरु यस्ता छन् १.यो देशलाई सन् मध्य १८०० देखि “थानी” वंश द्धारा राज गरिँदै आइरहेको छ । २. कतार बचाउन धेरै बहादुरीका साथ युद्ध लडेका “शेख जसिम बिन मोहम्मद अल थानी” लाई यो देशको संस्थापक मानिन्छ । उनकै पाला देखि अरब देशहरुमा व्यापारको ढोका खुल्ला गरिएको थियो । ३. १८ डिसेम्बर यहाँको राष्ट्रिय दिन हो । यही दिन शेख जसिमले कतार एकिकरण गरेका थिए । ४. कतारलाई सन् १७८३ देखि १८६८ सम्म बहराइन र साउद
Mar192018 by AdministerNo Comments
काठमाडौँ । यौनको विषयमा उदार र जागरुक बन्न थालेपछि नेपालमा गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग बढेको छ । पछिल्लो समय पिल्स र निलोकनलाई गर्भनिरोधक चक्कीको रुपमा नेपाली महिलाले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, गर्भनिरोधक चक्की खानु पहिला यसको बारेमा जानकारी लिन जरुरी रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । यदी गर्भनिरोधकको रुपमा खाने चक्की प्रयोग गर्ने हो भने एक पटक चिकित्सकको सल्लाह लिँदा उचित हुने ग्रिनसिटी अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर रुपा झाले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘गर्भनिरोधकको सही तरिकाले प्रयोग गर्दा फाइदा छ । गलत प्रयोग गर्नुभयो भने ज्यान पनि जान सक्छ ।’ पिल्स, निलोकन, डिपो प्रोभेरालगायत गर्भनिरोधकका अस्थाई साधन हुन । जुन २८ वटा चक्की रहेको हुन्छ । २१ दिनसम्म सेतो चक्की र त्यस पछि खैरो रंगको चक्की खानुपर्ने हुन्छ । डाक्टर झाका अनुसार खैरो चक्की खान शुरु गरेको २ देखि ३ दि
उद्योग मन्त्री मात्रिका यादव अचानक दिल्लीमा, भेटे भारतीय विदेश मन्त्री
काठमाडौं-उद्योग मन्त्री आज अचानक दिल्ली पुगेका छन् । दिल्लीमा उनले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भेट गरेका छन् । विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता रवीशकुमारले मन्त्री यादव र स्वराजवीच व्यापार र विकासमा आपसीहितका विषयमा कुराकानी भएको जनाएका छन् । मन्त्री यादव के कार्यक्रमका लागि दिल्ली गएका हुन भन्ने खुलेको छैन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई चिनियाँ निकट भनेर अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यले समाचार दिने गरेका छन् । यस अघि ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै स्वराज भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएकी थिइन् । सो क्रममा उनले ओलीसहितका शीर्ष नेतासँग भेट गरेकी थिइन् ।
सुर्खेत– यस वर्षको एसईइ परीक्षामा सुर्खेतका झण्डै ३ सय विद्यार्थी सामेल हुन नपाउने भएका छन् । चैत ८ गतेबाट सञ्चालन हुन लागेको कक्षा १० को एसईइ परीक्षामा जिल्लाका २ सय ८० जना विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुन नपाउने जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितबहादुर शाहले जानकारी दिए । विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिरी नपुगेको र केही विद्यार्थीले राजश्व समेत नबुझाएका कारण परीक्षा दिन नपाउने भएका हुन् । जिल्लामा ३० विद्यालयका विद्यार्थीहरुले नियमित तर्फ ७ हजार १ सय ७४ जना विद्यार्थी सहभागी हुने र एक्जाम्टेड तर्फ ८ सय १८ जना गरी जम्मा सात हजार ९ सय ९२ जना विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागि हुने जनाईएको छ । २०७३ सालमा नियमित तर्फ ६ हजार ९ सय ४५, एक्जाम्टेड तर्फ दुई सय ७८ र ग्रेडबृद्धिमा उन्नाइस सय ७ जना विद्यार्थी गरी जम्मा नौ हजार १ सय ३० विद्यार्थीले एसइइ परीक्षा दिएका थिए । परीक्षाको आचार संहिता जारी जिल्ला शिक्षा
एजेन्सी– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच विकास, साझेदारी र द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको समाचारमा जनाइएको छ । बुधबार भएको टेलिफोन कुराकानीमा जारी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धाको बिषयमा छलफल भएको समाचारमा जनाइएको छ । क्रेमलिनका अनुसार राष्ट्रपति पुटिन र प्रधानमन्त्री मोदीबीच बुधबार सो वार्ता भएको थियो । बुधबार रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गरेका थिए । दुई नेताले नयाँ बर्षको शुभकामना आदानप्रदान गर्नुकासाथै दुई देशको विकासको साझेदारिताको प्रतिवद्धताका साथै रुस र भारतबीचको विशेषगरी सामरिक साझेदारीको विषयमा आगामी दिनमा पनि यसैगरी उच्चस्तरीय वार्तालाई निरन्तरता दिने बारेमा पनि सहमति भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति पुटिनले गत डिसेम्बर ३० मा पनि प्रधानमन्त्री मोदी र भारतीय राष्ट्रपति राम नाथ कोबिन्दलाई नयाँ बर
–माइकल स्पेन्स एजेन्सी– मजस्ता अर्थशास्त्रीहरूलाई लगानी, शिक्षा र रोजगारीका साथै तिनीहरूको नीतिगत अपेक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा फर्म, व्यक्तिगत र संस्थाहरूको विकल्पहरूका बारेमा सूचित गर्नसक्ने प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा कुनै निश्चित जवाफ छैन । तर पर्याप्त जानकारीका साथ अर्थव्यवस्था, बजार र प्रविधिका सन्दर्भमा कसैले पनि बुझ्न सक्छ र उचित अनुमान लगाउन सक्छ । विकसित संसारमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैगरी राजनीतिक विच्छेदन, ध्रुवीकरण र तनावका साथ धेरै अर्थतन्त्रहरूले वृद्धिको तीव्रतालाई अनुभव गरेसँगै सन् २०१७ को वर्ष सम्भवतः विपरित अवधिको रूपमा सम्झना हुनेछ । लामो अवधिमा राजनीति र शक्तिहरूलाई केन्द्रबाहिर राख्न आर्थिक प्रदर्शनले प्रतिरक्षाको काम गर्नेछ भन्नु सम्भव छैन । यद्यपि अहिलेसम्म बजार र अर्थतन्त्रहरूले राजनीतिक अशान्तिलाई बन्द गरेको छ र पर्याप्त अल्पकालीन शङ्काका जो
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बिग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती….., विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती…. जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं । यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं ।
एजेन्सी– ब्राजिलको मध्यपश्चिमी क्षेत्रमा रहेको एक कारागारमा बिहीबार दोस्रोपटक दङ्गा भएको छ । सन् २०१८ को सुरुपछि यसप्रकार जेलभित्र दङ्गा सुरु भएको यो दोस्रो पटक हो । अधिकारीहरुका अनुसार यस दङ्गाको क्रममा एकजना कैदीले भाग्ने मौका पाएका थिए तर उनलाई पनि पुनः कब्जामा लिइएको जनाइएको छ । यस दङ्गामा कुनै व्यक्ति हताहत भने नभएको बताइएको छ । ब्राजिलको दोस्रो ठूलो सहर आपारेसिदा डे गैआनियामा यो दङ्गा सुरु भएको थियो । यसअघि पनि नयाँ बर्षको दिनमा उक्त कारागारमा कैदीहरुबीच दङ्गा भएको थियो । यसमा परी १४ व्यक्ति घाइते भएका थिए । ब्राजिलका जेलभित्र यस्ता हत्या हिंसाको घटना बारम्बार हुने गरेको पाइन्छ । सन् २०१७ को जनवरीमा कारागारमा भएको यस्तो दङ्गामा परी एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो ।
करेला स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो । तर, कतिपय बिरामीका लागि भने तितेकरेला विष साबित हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैन : गर्भवती हुनुहुन्छ ? करेलामा भएको मोमोकेरिनले गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँछ । बढी करेलाको सेवनले गर्भ तुहिनेसमेत डर हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा करेला खाँदा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । फर्टिलिटी समस्या भएमा यदि फर्टिलिटीसम्बन्धी औषधि लिइरहनुभएको छ भने करेला प्रयोग गर्दा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ । करेलाको प्रयोगले फर्टिलिटीसम्बन्धी औषधिको प्रभावलाई कम गर्छ र रोगको मात्रा बढ्दै जान्छ । त्यसैले यस्तो समस्या भएको पुरुष र महिलाले करेला प्रयोग गर्नु हितकर हुँदैन । पायल्स छ ? पायल्सको समस्या छ भने पनि तितेकरेलाबाट टाढै रहनुस् । किनकि, तितेकरेलाको प्रयोगले पायल्सको समस्यालाई थप बल्झा
काठमाडौँ –आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालु आवमा तीन हजार २६७ व्यापारिक संस्थाको अनुगमन गरेको छ । सबैभन्दा बढी तीनहजार ४२ वटाको काठमाडौँ उपत्यकामा नै अनुगमन गरिएको तथा ७९६ व्यवसायलाई दर्ता प्रमाणपत्र पेश र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । त्यस्तै नियम विपरीत सञ्चालित ७४ व्यवसायलाई बन्द नै तथा १८ वटाको कारोवार रोक्का गरिएको बताइएको छ । बन्द गरिएका केही व्यवसाय पुनःसञ्चालनमा छन् भने केही अझै खुल्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी म्याद नाघेको औषधि बिक्रीवितरण गरेको र व्यवसाय प्रमाणीकरण नगरेको जनाउँदै बयोधा अस्पताल प्रालि, इशान बाल तथा महिला अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल प्रालि, ग्राण्डी इन्टरनेशनल अस्पताल प्रालि र नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल एण्ड कलेज प्रालिलाई कारवाही गर्न महानगरीय प्रहरी पर
राती सुत्ने बेला यो चिज दुइ थोपा मात्र लगाउनुस र… (2,158)
१०० जना केटाको लिङ्ग यसरी समातिन यी युवतीले (भिडियो सहित) (1,937)
सेक्स सकेपछी महिलाहरु पुरुषबाट यी कुराको पर्खाईमा… (1,878)
के हुदैछ वैशाख १० गते को दिन, यो जानकारी थाहा पाऔँ ! (1,098)
तपाईका लागि यस्तो छ भोलि २०७५ साल बैशाख ९ गते… (180)
राती सुत्ने बेला यो चिज दुइ थोपा मात्र लगाउनुस र… (136)
श्रीमतीको यौन इच्छालाई पूरा गर्न नसक्ने पुरुषलार्इ… (93)
१०० जना केटाको लिङ्ग यसरी समातिन यी युवतीले (भिडियो सहित) (80)
बच्चा नै नबस्ने गरी साधन बिना कसरी यौन सम्पर्क गर्न… (63)
आज पनि बढ्यो ३ बर्ष कै उच्च मुल्य मा आज… (35)